Iindaba -Uwukhetha njani umatshini wokucheba ityhubhu efanelekileyo ye-laser?
Kubomi bemihla ngemihla, sihlala sibhekisa kwimibhobho yesinyithi ngokudibeneyo njengemibhobho yentsimbi, kodwa kwicandelo lokusika imibhobho, kufuneka sahlule ukuba ingaba isinyithi ngumbhobho wentsimbi yecarbon, umbhobho wesinyithi sesinyithi, umbhobho wesinyithi, insimbi yombhobho we-titanium okanye umbhobho wealuminium alloy . Ngenxa yokuba izinto ezahlukeneyo zineempawu ezahlukeneyo ezinje ngobulukhuni, ubulukhuni, uxinano, kunye nokumelana nobushushu obuphezulu, indlela yokukhetha elungileyoUmatshini wokusika umbhobho we-laser amandla?
I-laser ineempembelelo ezahlukeneyo kwizinto ezahlukeneyo zesinyithi. Amandla e-laser ayahluka ngokwezixhobo zentsimbi. Umzekelo, ngobukhulu obufanayo, amandla e-laser okusika i-carbon steel asezantsi kunalawo angenasici, kwaye amandla e-laser okusika intsimbi engenasici angaphantsi kunalawo tyheli. Amandla eCopper amancinci. Ukongeza kwindalo yesinyithi uqobo, ubukhulu bayo buhambelana kakhulu namandla e-laser. Kwityhubhu efanayo yesinyithi, amandla okusika e-10mm asezantsi kunokusika i-20mm.
Ngokumalunga nendlela yokukhetha amandla afanelekileyo, kuya kufuneka kugqitywe ngohlobo, ubukhulu, imilo kunye nezinye izinto ezinokusikwa. Ke ngoko, xa uthenga umatshini wokusika umbhobho we-laser, kufuneka uvumele umenzi azi iimpawu zezinto ezifuna ukusikwa. Eyona nto intle ukubonelela ngombhobho kumenzi ukuze aqinisekiswe.
Okwangoku, oomatshini abahamba phambili bombhobho wokusika umbane kwimarike banamandla amaninzi, ukusuka kwi-1000W ukuya kwi-15000W. Ubunzima bezinto ezininzi zokulungisa imibhobho ziphakathi kwe-8mm-12mm. Ukuba usike obu bunzima ixesha elide, kuyacetyiswa ukuba ukhethe oomatshini bokusika umbhobho we-4000W-6000W. Ukuba lubhedu olunempawu ezibonakalayo eziphezulu, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe umatshini wokusika ityhubhu ye-laser ene-8000W okanye amandla aphezulu. Umatshini wokusika umbhobho we-laser we-2000W-4000W kucetyiswa ukuba ubungakanani phakathi kwe-5mm-8mm. Ubunzima obusezantsi be-1000W buhlala banele. Kufuneka kuqatshelwe ukuba xa uthenga umatshini wokusika umbhobho we-laser we-6000W, xa usika izinto ezinobunzima obuncinci malunga ne-4mm, ungathoba ukukhulisa imveliso kwaye uyihlengahlengise kwi-2000W yokusika, okonga amandla kunye nokugcina umbane kunye neendleko.
Ixesha Post: May-04-2021